WordPress ဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုစပမ်ကာကွယ်မှုဗားရှင်း 2.0.0 ဖြန့်ချိ! | Martech Zone
WordPress ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကို Spam Protection Version 2.0.0 ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ။
တနင်္ဂနွေ, မေလ 6, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
UPDATE: ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ် RocketGenius မှဆွဲငင်အားပုံစံများ WordPress နှင့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ပုံစံပေါင်းစည်းမှုအတွက်!
မှတ်ချက် ၁၄၀ ကျော်ဖြင့်စပမ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပါရှိသောဆက်သွယ်ရန်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံသည်ကျွန်ုပ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီပေးခဲ့သည့်လူကြိုက်အများဆုံး plugin ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူပြီး၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကျွန်ုပ်၏လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ငါ plugin ကိုအပေါ်တုံ့ပြန်ချက်တွေအများကြီးရရှိခဲ့နှင့်နောက်ဆုံးတော့ပေါင်းစပ်, ကအပေါ်ပြုမူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အားလုံး ငါ၏အစာဖတ်သူများရှိခဲ့ကြသောအကြံပြုချက်များ!
ဘာသာရပ် dropdown list ဖန်တီးနိုင်စွမ်း။
လွန်ခဲ့သောလယ်ကွင်းများတွင် script tag များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများ။
ပုံမှန်ဘာသာရပ်လိုင်းကိုသတ်မှတ်ရန် (သို့) အသုံးပြုသူကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်စုရုံးနိုင်ခွင့်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤဗားရှင်း (2.0.0) သို့အဆင့်မြှင့်ပါက code စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးသောသင်၏ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာရှိကုဒ်ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အရင်တုန်းကမှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာအခုတော့ပုံမှန်အစားထိုးကြိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် download link အတွက် Project Page သို့သွားပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းတည်နေရာ၊ စာဝှက်ခြင်း၊ အိုက်စလန်နှင့်ဂျပန်ကြောင်ဓာတ်ပုံဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း
မေလ 6, 2007 မှာ 8: 29 pm တွင်
မေလ 6, 2007 မှာ 9: 15 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Wes! ဒီပလပ်အင်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လအနည်းငယ်ကြာခဲ့တယ်။ ငါကဘာသာစကားမျိုးစုံလုပ်ဖို့နဲ့အနာဂတ်မှာနောက်ထပ်စတိုင်စိတ်ကြိုက်ထပ်မံထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ အခုဒီတစ်ခုရချင်တယ်။
မေလ 6, 2007 မှာ 11: 41 pm တွင်
ငါမတိုင်မီ iFrames နှင့်အခြား HTML ပုံစံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ယခုပုံစံဤစနစ်ကိုကြိုးစားသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
မေလ 7, 2007 မှာ 8: 48 AM
စိတ်ကူးယဉ်တိုးတက်မှုများ! ကျွန်ုပ်လက်ရှိ WP အဆက်အသွယ်ပုံစံအားလုံးကိုဒီပုံစံနဲ့အဆင့်မြှင့်လိမ့်မယ်။ ထုံးစံဘာသာရပ်လိုင်းတို့သည်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြသည်။
wpZipper ရှိ plugin စာရင်းထဲသို့လည်းထည့်ပါမည်။
သင်က၎င်းကိုအမည်အသစ်ပေးရန်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ သို့မှသာလူများသည်ယခင် Contact Form plugin (များ) နှင့်လူတို့ကိုပိုမိုခွဲခြားနိုင်သည်။
Karr ဆက်သွယ်ရန်? (နှစ်ဆ“ K” ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ခုခံခဲ့သည်)
မေလ 7, 2007 မှာ 9: 59 AM
ဒီနေရာမှာနာမည်ပြောင်းတာဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့ထင်တယ်။ အဲဒါကိုအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၊ ငါ့အတက်ကြွဆုံးစာမျက်နှာဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်…အမည်၊ “ Spam Protection နှင့်အတူ WordPress ဆက်သွယ်ရန် Form” သည် SEO ၏တန်ဖိုးရှိသည်။ 🙂
မေလ 7, 2007 မှာ 8: 19 pm တွင်
ခင်ဗျားရဲ့ plugin ရဲ့သမိုင်းကိုတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ နာမည်ပြောင်းတာဟာဒုတိယအတွေးမှာမကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။
မေလ 7, 2007 မှာ 8: 12 AM
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါ၊ ကျွန်တော်ကပဲနှုတ်ကနဲပဲနှုတ်ဆက်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါကမင်္ဂလာပါလို့တစ်လလောက်ကြာပြီ။
မေလ 7, 2007 မှာ 8: 20 AM
ငါ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအားလုံးကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်တယ် စီမံကိန်းစာမျက်နှာ။ ငါ့မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောက်မှာနောက်ထပ် ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၂ ခုရှိတယ်။
မေလ 7, 2007 မှာ 1: 55 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်, သောကျောက်။ ဤမျှကြီးစွာသောပလပ်ဂင်တစ်ခုကိုပြုလုပ်သည့်အတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင်အသုံး ၀ င်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အနုပညာညီအစ်မအတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသောဆိုဒ်တစ်ခုတွင်ထပ်မံအသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ။
မေလ 7, 2007 မှာ 3: 56 pm တွင်
ဂျွန်၊ ကြင်နာသောမှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သငျသညျအပိုဆောင်း features တွေအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်လျှင်, ငါ့ကိုလိုင်း drop ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။
မေလ 7, 2007 မှာ 1: 15 pm တွင်
ကြီးစွာသောအလုပ် Doug ။ ပထမတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအဆက်အသွယ်ဟောင်းစာမျက်နှာဟောင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
မေလ 7, 2007 မှာ 3: 57 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒင်း။ WP-Cache မှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ငါလိုအပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်တဲ့အထိပိတ်ထားလိုက်ပြီးပြန် cache ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။
မေလ 8, 2007 မှာ 3: 10 pm တွင်
Doug! အဆက်အသွယ်ပုံစံသည်အလွန်ချောမွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အလိုတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်သို့ထည့်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
မေလ 10, 2007 မှာ 7: 43 pm တွင်
မေလ 10, 2007 မှာ 8: 02 pm တွင်
ပြproblemနာမရှိပါ Doug - ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမင်းဟာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့် nice ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပါ
မေလ 15, 2007 မှာ 8: 55 AM
အိုကေ၊ ဒီဟာကိုငါသုံးတယ် ငါ၏အ site ကိုနှင့်က rad ပါပဲ။ ငါလိုအပ်သမျှရုံပေါင်းပိုကောင်း။ ပြီးပြည့်စုံသော WordPress ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေလ 15, 2007 မှာ 9: 12 AM
မင်းလောင်း, Shawn! လာရန်ပိုစိတ်ကြိုက်! အပိုဆောင်းမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပြင်အဆင်နှင့်စတိုင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း!
မေလ 17, 2007 မှာ 11: 01 AM
မေလ 17, 2007 မှာ 11: 16 AM
Shawn, ဒါကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရဲ့အဖြေပဲ။ တကယ်တော့ Akismet မှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေကိုငါတကယ်ရေးပြီးသူတို့ကငါနဲ့အတူမှတ်ချက်ပေးဖို့သူတို့လုပ်ချင်တာလားလို့သူတို့ကိုမေးခဲ့တယ်။
သို့ရာတွင်၊ WordPress ၂.၂ တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းအသစ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပလပ်အင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတူးပြီးကြည့်လိုက်မယ်။
မေလ 18, 2007 မှာ 4: 06 AM
ဒေါက်ဂလပ်, ငါ့မွေးနေ့တက်လာမယ့်သင်ဘယ်လိုသိသနည်း။ !?
ဒါအံ့သြစရာပဲ! အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံး Plugin ကို! ငါကပိုကောင်းမလာနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာ! 🙂
မေလ 18, 2007 မှာ 6: 13 AM
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့, Joni! ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ် လာဖို့ပို! သေချာအောင်လုပ်ပါ ငါ၏အအခြားစီမံကိန်းများကိုထွက်စစ်ဆေး!
ဇွန် 4, 2007 မှာ 9: 50 pm တွင်
တင်သွင်းမှုအပေါ်သင်ကိုယ်တိုင်ကူးယူရန် optional ကို checkbox ကိုအတူယနေ့အသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ချိဆက်ပြောသည်။
Sachi @ ဒင်း
ဇွန် 7, 2007 မှာ 1: 49 pm တွင်
ဟေး Doug- ဒါဟာတော်တော်လေးခဏပါပဲ။ ငါရှာဖွေရေးလုပ်နေစဉ်ဤ plugin သို့ပြေးဝင် ဒါပေါ်မှာကြီးစွာသောအလုပ်။
မေးခွန်းမေးခွန်း - သင်ပြောခဲ့သလို drop drop list ကိုဘယ်လိုထည့်သလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာသို့ ၀ င်ပြီး 'ထည့်ရန်သာလိုပါသလား။ (Option A, Option B, etc ... )? ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး သိသာထင်ရှားတဲ့ငါတစ်ခုခုပျောက်နေတာပါ။
ဇွန် 7, 2007 မှာ 2: 05 pm တွင်
၎င်းသည်နောက်ဆုံးထွက်ထုတ်လုပ်သည့် Dean ၏အသွင်အပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေမှုရှိလျှင် - ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည်ဘာသာရပ်များကိုထည့်ပြီးပိုက်ဖြင့် သုံး၍ ခွာနိုင်သည်။
Nick Normal ပါ
3:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 48
ဤပလပ်အင်ကို 'ချွတ်ချွတ်ပစ်' နိုင်သလား၊
'သင်၏အီးမေးလ် [စာသားဖြည့်စွက်ရန်အကွက်] [submit button]' ?????
အလွန်ရိုးရှင်း အသုံးပြုသူသည်အီးမေးလ်ကိုထိုအကွက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ အသုံးပြုသူသည်စာပို့စာရင်း (ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းခြင်း) ထဲကိုပါဝင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်တစ်ခုသို့ပို့လိုက်သည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက် WP plugin ကိုအသုံးပြုရန်ဝေးလွန်းနေသလော။
တစ်စုံတစ် ဦး က 'submit' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်မည်သည့်စာမျက်နှာကိုသူတို့ယူသွားသနည်း။ ဒါမှမဟုတ်တင်သွင်းမှုကိုအတည်ပြုပါသလား။
3:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 34
ခင်ဗျားထင်တာကတော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ ဒါကအီးမေးလ်ကြေးပေးသွင်းမှုပလပ်အင်မဟုတ်၊ အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာပလပ်ဂင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါခင်ဗျားအီးမေးလ်မှာစာရင်းသွင်းတဲ့ကိရိယာလိုချင်တယ်၊ ငါ Feedburner ကိုအကြံပြုချင်တယ်။
MT သံတော်ဆင့် Dot Com
24:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 36
ကြောင်းအကြီးအ plugin ကိုများအတွက် Thanx ။ အဆုံးစွန်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျလညျးငါ့ site မှာအရေးယူအတွက်မြင်နေရတယ်။ spam ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေအများကြီးလျှော့ချ။
စက်တင်ဘာ 4, 2007 မှာ 9: 50 AM
မင်္ဂလာပါ၊ သုံးစွဲသူတစ် ဦး ၏ wordpress အခြေပြုဆိုဒ်အတွက်မှတ်ချက်ပုံစံကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်။ ထို site ကို အသုံးပြု၍ ကွဲပြားသောအုပ်စုနှစ်စုအတွက်ပုံစံနှစ်မျိုးရှိသည်။
စက်တင်ဘာ 8, 2007 မှာ 8: 04 AM
ယနေ့ 2.0.7 မှအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည် ဤဗားရှင်းသည် wp_mail ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည် Callum Macdonald။ သင်၏အိမ်ရှင်နှင့်အလုပ်လုပ်သောမေးလ်နှင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြသောသင်တို့အားလုံးအတွက် - ဤအချက်သည်လှည့်စားသင့်သည်!
7:2007 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 38